warkii.com » Hordhac: Liverpool vs Chelsea – Reds Oo Koobka La Siinayo, Blues Oo Doonaysa Inay Farxadda Ka Carqaladayso Si Ay Booskeeda 3aad U Xajisato Iyo Shaxaha Macquulka Ah
Hordhac: Liverpool vs Chelsea – Reds Oo Koobka La Siinayo, Blues Oo Doonaysa Inay Farxadda Ka Carqaladayso Si Ay Booskeeda 3aad U Xajisato Iyo Shaxaha Macquulka Ah
Liverpool ayaa ugu dambayn gacanta laga saari doonaa koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo ay ku guuleysatay bishii hore, waxaanay noqon doontaa markii ugu horreysay ee ciyaartoy Liverpool ka tirsan uu gacantiisa taabsiiyo koobka muddo soddon sannadood ah.
Garoonka Anfield ayaa loo qurxiyey xafladda dabbaal-degga, waxaana laga shidi doonaa iftiin weyn iyo layladh midabbo kala duwan, laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay in aanay taageereyaashu gudaha garoonka soo geli doonin maadaama fayraska Korona loo joojiyey in taageereyaashu garoomada yimaaddaan.
Halka ay Liverpool xafladaynta iyo damaashaadka iskaga diyaarinayso, Chelsea oo marti ah waxay dagaal u geli doontaa sidii ay guusha ciyaarta u heli lahayd, isla markaana booskeeda kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League u xajisan lahayd, kaas oo ay suurtogal tahay in Manchester United ay kala wareegto marka ay laba saacadood ka hor la ciyaarto West Ham United.
Blues waxay hal dhibic ka sarraysaa Manchester United iyo Leicester City, waxaanay ogtahay in haddii ay ka guuleysan waayaan Liverpool ay luminayaan kaalintooda saddexaad, taas oo halis ku noqon karta inay afar sare ku dhamaystaan.
Alan Hansen ayaa ahaa kabtankii ugu dambeeyey ee Liverpool ah ee koobka horyaalka kor u qaada, waxaana nasiibkiisu siiyey in inkaartan muddada dheer soo jirtay uu soo afjaro Jordan Henderson oo noqon doona kabtankii 10aad ee Liverpool ah ee koobka qaada.
Marka laga yimaaddo Henderson iyo Hansen, waxa 17kii koob ee Premier League ee ka horreeyey Liverpool u qaaday Graeme Souness, Phil Thompson, Emlyn Hughes, Tommy Smith, Ron Yeats, Willie Fagan, Donald McKinlay iyo Alex Raisbeck.
Halyeygii Liverpool ee Kenny Dalglish ayaa bixin doona abaal-marinnada oo biladaha ciyaartoyda qoorta u sudhi doona.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, Liverpool waxay yara gashay xaalad nasasho oo kale ah, waxaana laga badiyey laba ka mid ah iyadoo labadii ciyaarood ee ugu dambeeyeyna aanay guul arag.
Saddex guulood, laba guul-darro iyo mid barbarro ah ayaa kooxda tababare Jurgen Klopp loosoo diiwaangeliyey.
Chelsea dhinaceeda, waxay lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey kusoo qaadatay afar guulood iyo laba laga badiyey.
Ciyaarta: Liverpool vs Chelsea
James Milner ayaa la filayaa inuu ciyaarta kusoo laabto kaddib daaweyn looga sameeyey dhaawac muruqa ka gaadhay toddobaadkii hore.
Jordan Hendereson iyo Joel Matip ayaa gebi ahaanba ciyaartan ka maqan, laakiin kabtan Henderson wuxuu soo fuuli doonaa fagaaraha isaga oo labbisan marka ay ciyaartu dhamaato si koobka uu ugu guddoomo kooxdiisa.
Jurgen Klopp ayaa shaxdiisii ugu adkayd kusoo bilaabay kulankii Arsenal ee ay guul-darradu kasoo gaadhay, xilli la filayay inuu ciyaartoyda da’da yar fursad siiyo, laakiin waxa booskiisa markan u qalqaalanaya Naby Keita oo beddel aan waxba samayn ka ahaa kulankaas.
Dhinaca Chelsea, waxa mar kale ka maqnaanaya N’Golo Kante iyo Billy Gilmour oo dhaawacyo muruqa iyo jilibka ah qaba, mana jiraan wax kale oo walaac geliya Lampard oo wiiqa kara shaxdiisa.